Vaz-2110: esikhundleni phambi luhamba ngezandla
On Vaz-2110 esikhundleni uprights phambi wenziwa nge PERIODICITY okungukuthi kuncike ezicini eziningi. Okokuqala, indima enkulu eyadlalwa isitayela ukushayela. Okwesibili, izinga imikhiqizo. Okwesithathu-ke, yini imigwaqo kufanele sishayele inqola. Futhi ungacabangi ukuthi uma undiza phezu uhlevane, kuyomelwe uwaphule ukuma. Isithombe kunalokho okuphambene. Yiqiniso, amagalelo abukhali ubuhlungu ukumiswa. Kodwa ukushaqeka mfutho imisebenzi Stroke sekuphelile, ngakho-ke, kuyoba ukugqoka ngokulinganayo. Konke ukungabi nangqondo, kodwa indlela kwenzeka ezimweni eziningi. Kodwa ngesinye isikhathi, uqala ukuqonda ukuthi yini edingekayo ukuze alungise noma esikhundleni A izinsika. Manje sizobe ukukhuluma kanjani lokhu.
Izimpawu zokuguga izinsika
Into yokuqala ukuthi abambe iso lakho, ngakho kuba phambi amabala amagcobo phezu kwesihloko anther, surface entwasahlobo strut. Iqiniso ukuthi mfutho ukushaqeka isetshenziswa ukumiswa nge ukugcwaliswa uwoyela. Futhi uketshezi akusho izogobhoza ke, lifakwe phezulu le nokupakisha. Nge lapho kubhujiswa lesi mfutho ukushaqeka uqala ukugeleza, uhlelo ukumiswa Ngakho, kwaphazamisa ngokuphelele. Lokho kusho ukuthi isidingo esikhundleni A-insika Vaz-2110. izandla zabo ukuze kube lula.
Xilonga ukungasebenzi kungaba kalula, wena nje sibheke kobuso mfutho ukushaqeka. Ride induduzo ngesikhathi bafake ukumelana eziwohlokayo: njalo, ngisho Bump kulencane kuzokwenza imoto long jump. Kubonakala sengathi ukhona lapho kunesivunguvungu umkhumbi. I okunyakazisa imoto, wayekade eside ukuza evamile. Ububi lokhu kuziphatha kuzibonakalisa maduze ngokwanele: lokhu kungadala imifantu dash, somoya.
izingxenye Main luhamba Vaz-2110
Yima umzimba - a mfutho ukushaqeka. Ngosizo lwakhe, le Vaz-2110, esikhundleni struts phambi okuyinto kubhekwa ezihambayo ngokushelela kunoma iyiphi semfene. Waze kuthi akufane nokwenzeka futha tube ngoba isondo kwamandla emali. Nokho, isimiso sokuthi wokusebenza futhi zifana kakhulu. Kufanele kuqashelwe ukuthi shock absorbers esetshenziswa imoto Vaz-2110, abasebenza ngezindlela ezimbili. Entwasahlobo okuyinto efakwe phakathi ibha kanye ingilazi emhlane ivumela ukumiswa ukunikeza rigidity. Ngosizo imoto cishe akusho ukuqaphela isandla semfene encane komgwaqo, bona kweso eshelelayo entwasahlobo elukhuni. eziveza Yelula - lesi sici kohlelo, elivumela yokubeka ukuze ushintshe indawo yayo ehlobene umzimba imoto.
Ngamanye amazwi, ingasetshenziswa ukuze uphendukisa. lomzimba walo unamathele umzimba umshini futhi ngaphakathi engaguquki ukushaqeka-mfutho induku. Esikhundleni phambi insika ukwesekwa Vaz-2110 liyadingeka ngisho ngesikhathi wezinciphisi ukulungisa ukushaqeka. It kuvela ukuthi yokugcina ixhunywe umzimba, kodwa kuphela ngokusebenzisa isigaba sesikhashana - ilunga ngezinhlamvu ezihlelwa ngesandla. indima ebalulekile eyadlalwa izakhi ezincane Rack akhiwe ngerabha - chippers futhi anthers. Kwakamuva ukuvikela induku ukungcola nothuli, futhi owokuqala ukungavumeli kuye ukungena ebiyelwe yokubeka lize lithi khimilili.
Ukukhishwa noma ukulungisa?
Kuyinto ukukhuluma mayelana nokwenzeka ukubuyiselwa shock absorbers. Yiqiniso, esikhundleni ngaphambili igobolondo strut Vaz-2110 ungagcina isimo, wenze mfutho ukushaqeka isebenze evamile. Kodwa lokho nje amandla ngabe kugcwaliseke zonke ukulungiswa? Kit yokutakula damper ishibhile imikhiqizo siphelile. Kodwa lokho caveat eyodwa nje: kudinga njengoba uthele ngokunembile uketshezi izindlu.
Uma wenza iphutha amagremu ambalwa phezulu noma phansi, ukushaqeka ngeke zisebenze. Yena noma ngawakhamela uwoyela ngesikhathi ukuhlinzwa, noma isiqu uzokwenza ukunyakaza khulula zingakaze zibe ukumelana uketshezi. Kodwa kukhona omunye inzuzo - akudingeki ukwenza kusetshenziswe ukuqondanisa. Kuncike Yiqiniso, ukuthi sime phambi Ukudilizwa evezwe isikhundla yayo ehlobene ihabhu. Kodwa uma phezu Vaz-2110 esikhundleni windscreen izinsika ezenziwe, kusetshenziswe ukuqondanisa ukukwenza kuyadingeka.
Ngakho kudingeka okhiye 17, 19, 13, 10. Ngaphezu kwalokho, stripper ekhethekile edingekayo ukuze iziphethu kanye eziqondisa ichopho, a-earphone, chocks, lokukhuphula emotweni basekela. Yilokho, ungakwazi manje uqale. Sithathe imoto, emva kancane ziba ngcono amabhawudo masondo. Ngemva ekuzikhuliseni kungaba unscrewed ngokuphelele futhi isondo maphambili baba umshini. Manje, ukudonsa iphini aphume induku ayo, ukuze uyasikrufulula nut.
Manje iyanqamula ihabhu kanye yokubeka. Uma uhlela ukuba esikhundleni ukuphrinta igobolondo phambi strut Vaz-2110, bese uhlele ukuma ihabhu - udvweba umugca kuyoba emhlanganweni. Lokhu kuzogwema inqubo umgwaqo. Lokho bonke, manje, kukhishwe yonke inhlangano yokubeka, udinga ukususa ushingamu nge sisuse nezikulufi ezintathu ukuthi uvikelekile sihlobene wagxila emzimbeni. Ngaphezu kwalokho disassembly Kwenziwa esebenzisa kuheleza ayikho imoto.
Yakha yokubeka entsha
Ukuze bahlangane yokubeka entsha, uzodinga ezinye zezitho ubudala - entwasahlobo, kanye plate eliphezulu. It eyinsimbi ngakho bafake kukalutshwana kakhulu. Futhi ewusizo, kanye Washer engenhla, kanti lokhu kuhambisana phezu iphephabhuku esindayo. Wenziwe ngendlela isigqoko ezibanzi esinompheme omkhulu, insimbi efanayo. Zonke ezinye izinto ngokuthi kufakwe ungashiyi lutho, ngisho nati ne imishudo sentaba entsha.
Uma uthatha liner phambi strut Vaz-2110, zonke izakhi yesibili ezifana eziveza ukwelula, iqhubu, zibhonge, imishudo namantongomane, futhi, kudingeka sigqoke obusha. Okokuqala ukusetha mfutho ukushaqeka thwi ke opha ke, edonsa induku izikhathi eziningana kuze kube yilapho sithule. Ngemva ukukulungisa kule sikhundla enwetshiwe bese enhlanganweni. Okokuqala, wafaka isiphethu, kumele onomfutho. Khona-ke, ibekwe ipuleti futhi uma kunesidingo ukwandisa uphawu imvume. Ngemva kwalokho, ukukhweza wagxila ebizwa, nut ukudla okuhlukahlukene. Manje nge entwasahlobo angasuswa stripper.
Vaz-2110 ku esikhundleni the struts phambi ilula, ufake nabo oda reverse ukususwa. Into esemqoka - ukuthola izikhonkwane e sihlobene imbobo yomzimba. Lapho esekwenzile lokhu, kudingeka uvumelane nuts ezishaywayo. Futhi manje kukhona imisebenzi embalwa kakhulu - unamathisele yokubeka ihabhu, ukufaka ngezikulufo ezimbili, phezulu kufanele kube Washer ome njengeqanda. Donsela uxhumano threaded, bese esikhundleni ithiphu ayo. Uma efakwe a yokubeka omusha, zama ukulungisa okungenani uzwane, nje ukuya indawo ye MOT. Uma nibulala amabhampa walulama, uzodinga kuphela ukulungisa camber.
Eqinisweni, esikhundleni the A-insika Vaz-2110 ngezandla zakhe oluphakeme okusheshayo. Ngaphandle kokuthi wonke ukuxhumana yangaphakathi ngaphambilini kusetshenzwe eyenza umuntu acabange eseZwini okugcotshwayo bayoba kalula ukuphuma. umsebenzi Ngaphezu kwalokho akunzima. Ngaphandle, yebo, etholakalayo wonke amathuluzi adingekayo - amabhowudu futhi pullers.
Kanjani ukuze uthole imoto e ukubanda okwedlulele? Ezinye iseluleko esisebenzayo
"Kalina-2": ukubuyekezwa abanikazi. "Kalina-2" (esiteshini enqoleni). "Kalina-2": ukukha
Uhlolojikelele Ford GT imoto ezahlukene
3 Ford Focus esiteshini enqoleni - ileveli entsha ukujabulela
Indlela yokwenza incwadi egunyaza ku imoto (car)
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka turnips: ukutadisha izakhiwo imikhiqizo
Kuyini Radon? Into leqembu 18 ishadi lesikhathi salezi izakhi zamakhemikhali D. I. Mendeleeva
Uchungechunge oluthi "U-Night Tatiana": incazelo yochungechunge
Prom. Yikuphi ukukhetha ingubo?
Indlela ukutshala imivini kusuka cuttings entwasahlobo? Amagilebhisi kusuka cuttings
Snorri Sturluson - Icelandic umlobi nesazi-mlando sezombusazwe